विशेष अन्तरवार्ता -“कुनै पश्चाताप छैन” : प्रचण्ड | mulkhabar.com
November 22, 2018 | 6:38 am 2315 Hits
शान्ति सम्झौता नभएको भए आजको नेपालको तस्बिर कस्तो हुन्थ्यो होला ?
पहिला जुन स्प्रिटमा सक्ने भनिएको थियो, त्यो सकिएन । विभिन्न जटिलता हरु पैदा भए । यसलाई कमीकमजोरी भन्न सकिन्छ । तर, ऐतिहासिक र दुरगामी महत्त्वको राजनीतिक क्रममा यी स्वभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरा पहिला परिकल्पना गरेअनुसार जस्ताको त्यस्तै, सुन जोख्या जसरी जाने प्रक्रिया नै होइन । यो प्रक्रियामा आफै थुप्रै समस्या र जटिलता जन्मिन्छन् । त्यसअर्थमा उल्लेखनीय गल्ती म देख्दिन ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग किन अलमलिरहेको छ ?
नेपाली काँग्रेसमा पनि यो विषय टुङ्ग्याउने विषयमा विमति छैन । नेपाली सेनाले त झन् यो राम्रोसँग टुङ्गियोस् भनेर चाहेकै छ । यसकारण केही ढिलो भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई अब टुंगिन्छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कसको कस्तो भूमिका थियो ?
भरतपुर महानगरमा विकासको गति कसरी अगाडि बढेको छ ? दिगो र आत्मनिर्भरमा केन्द्रित सन्तुलित र समुचित ढंगले…